Tababar ballaaran oo ciidan oo ka dhici doona Sweden - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhoola-tus ciidan sawir: Joel Thungren/Försvarsmakten
Tababar ballaaran oo ciidan oo ka dhici doona Sweden
Tababar aan dhiggiisu dhicin muddo 20 sannadood ah
La cusbooneeyay fredag 8 september 2017 kl 10.55
La daabacay fredag 8 september 2017 kl 09.39
Isniinta foodda innagu soo haysa 11-ka bisha sebteembar waxaa dalka Sweden ka bilaaban doona Tababar ciidan oo ballaaran oo aanu dhiggiisu horay uga dhicin muddo 20 sannadood ah.
Dadyoowga ka soo hor jeeda awood muujintan ayaa aamin-san inuu kor u qaadi doono cabsida laga qabo inuu xiisad abuuro.
Tababarkan ciidan oo loogu magac darey Aurora 17 waxaa loogu talo galey sidii loo adkeeyn lahaa awooda iska caabin ee duulaan lagu soo qaado dalka Sweden, iyadoona ey ka qayb qaadan doonaan ciidan lagu qiyaasay 20 000 oo ka dhici doona nawaaxiga Mälardalen, Stockholm, Göteborg iyo jasiiradda Gotland inta u dhexeeysa 11 iyo 29 sebteembar.
Ciidammo ka socda dhowr waddan oo xubno ka ah gaashaan-buurta Naato ayaa sidoo kale qeyb ka noqon doona, kuwaasina oo ey ka mid yihiin Mareeykanka iyo Faransiiska. Waa fal ey ka soo hor-jeedaan ururro ka mid ah kuwa nabadda u ololeeya.
–Waddammada aan xubnaha ka aheyn Naato ee loo sawiran karo cadow ayaa u dareemi kara halis. Iima muuqdaan inay ugu jirto dalka Sweden in la xoojiyo xasillooni la’aanta nawaaxigan, sida uu sheegay Tomas Magnusson, ahna guddoomiyaha laanta Göteborg ee ururka nabadda Sweden ee lagu magacaabo Svenska fred- och skiljedomsföreningen.
Dhowr urur nabadeed ayaa isku mideeystey sidii ey u abaabuli lahaayeen qorshe mudaaharaad ee looga soo hor-jeedo Aurora 17, iyada oo bannaan-bax lagu qaban doono goobo ay ka mid tahay magaalada Göteborg, waraaqo la qeeybiyo iyo sidoo kale siminnaaro la qabto.
Wasaaradda difaaca Sweden ayaa sheegtay in tababarkani aannu ahayn mid ay leedahay ururka Gaashaan-buurto Naato, hase yeeshee uu yahay tababar ciidanka difaaca Sweden. Ka qayb-galka cutubyada ajaaniibtu waxey adkeeyneyaan tayadooda iyo heshiiskii waddammadaa lala galey – värdlandsstödet. Awooddii iyo taageeradii lagu qaabili kari lahaa ciidammo ajaaniib ah.
Korneelka Stefan Sandborg, madaxa guutada labaad ee ciidammada difaaca wuxuu tababarkan kaga qeyb geli doonaa 3 000 oo askari. Sandborg ayaa qaba fikir ka duwan dadyoowga aamin-san in tababarkani khalkhal gelinayo xasiloonida.
–Weligeed wey jiri doonaan dadyoow aamin-san fikirkaa. Fikirkayga cilmiyeey-san ee tababarku wuxuu yahay in aannu ku howlanahey sidii aannu ku adkeeyn laheyn awoodda ka hor-tagga ee weerar nalagu soo qaado.
Madaxa guudtada labaad Stefan Sandborg ayaa wanaag u arka tababarrada waaweyn ee noocani oo kale ah.
–Tababarrada waaweyn ee noocani oo kale ah waxey noo suurtagelineyaan in ciidanku meel isugu yimaado. Aurora 17 wuxuu noo suurtagelinayaa iney noocyada kala duwan ee ciidammadu ey tababar si wada-jir ah meel ugu wada sameeyaan.